सेयर बजारमा यी कुरा ध्यान दिए घाटा हुदैनः सिए, मनोज ज्ञावलीको सुझाव « अर्थबजार – आर्थिक विकासको लागि सञ्चार
पुँजी बजारमा हल्लाको बिचमा लगानी गर्दा घाटा हुने संभावना बढी हुँन्छ । कहिले काही हामी पुँजी बजारलाई जुवा घर भन्छाै । व्यवाहारले त्यो होकी भन्ने पनि देखाउछ । मार्केट बढ्यो भने बढ्यो भनेर किन्ने र घट्यो भने बर्बाद नै हुन्छ कि भनेर दाैडिने प्रवृति हाम्रो लगानीकर्ताहरुमा देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा बजारमा प्रयाप्त जानकारी नै छैन छैन । एनलाइसिसको लागी सबै भन्दा महत्वपुर्णकुरा भनेको एडिक्विट इनफरमेसन नै हो । अहिले पनि बजारमा धेरै कम कम्पनीहरुको एडिक्विट इनफरमेसन पाइन्छ । केही समय अगाडी पनि एडिक्विट इनफरमेसन नभएको आधारमा नेप्सेले कारोबार समेत रोक्का गरेको छ ।
कतिपय कम्पनीहरुले नेप्सेले भनेको इन्फरमेसनहरु पनि सेयर गर्दैनन । एडिसनल इनफरमेसनको हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनाैँ । कुनै पनि संस्थाको इन्फरमेसनहरु यदी हामीले पाउने भनेको एउटा फाइनान्सियल इन्फरमेसन हुन्छ । हामी संग हुने भनेको फाइनान्सियल इन्फरमेसन हो ।
फाइनान्सियल इन्फरमेसन भन्ने वित्तिकै लेखापरिक्षण गरेको वित्तीय विवरण । फाइनान्सियल इन्फरमेसन हामी ब्यालेनसिटबाट हेर्छाै त्यसको नेटवर्थ पर सेयर कति छ ? ग्रोथको प्याटन के छ ? त्यस पछि नाफाको अवस्था के छ ? त्यसले कति बोनस दिन सक्छ ? अपरेटिङ्ग कस्टहरु कसरी भैरहेको छ ? भन्ने लगायतका कुराहरु हामीले यहाँबाट पत्ता लगाउछाैँ । त्यस पछि गएर कम्पनी बेवसाइटमा सुचनाहरु हुन आवश्यक छ ।
अर्को कुरा भनेको त्यो कम्पनीमा रहेका सञ्चालकहरु कस्ता छन् । कस्ता मान्छेले स ञ्चालन गरेका छन् । ब्यवस्थापनको अवस्था कस्तो छ ? त्यो कम्पनीमा भएका मान्छेहरुले सम्बन्धीत फिल्डमा लिड गर्न सक्छ कि सक्दैन ? भविष्यमा गएर त्यो कम्पनीले कस्तो प्रर्दशन गर्छ ? भन्ने कुरा त्यो कम्पनीको ब्यवस्थापनको क्षमतामा भर पर्ने हुँदा त्यो कुरालाई ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ ।
अर्को कुरा भनेको कुनै पनि क्षेत्रको कुरा गर्दा कम्पनिको पफर्मेन्स कस्तो छ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ । अब आउने बजेटले त्यो क्षेत्रमा कस्तो असर पार्छ ? बजेट पछि आउने माैद्रिक नीतिले कस्तो प्रभाव पार्छ ? यी कुराहरुको पुर्ण रुपमा जनकारी हुन आवश्यक छ । धेरै पटक हामी हल्लाको भरमा दाैडिन्छाैँ । अस्ति मात्रै राष्ट्र बैंकको माैद्रिक नीतिको समिक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेकेन्डरी मार्केटमा लगभग ट्रेडिङमा कारोबार गर्न नसक्ने गरि सर्कुलर आयो । बैंकले आज सेयर किनेर एक बर्ष पछि मात्रै बेचेन पाउने भयो । यो ब्यवस्था आउने वित्तिकै मान्छे अब बर्बादा हुन्छ जस्तो गरि अतालिए ।
मुख्य कुरा भनेको डाटा साइडमा हुनुपरो नि । पुँजीबजारमा बैंकले गरेको ट्रेडिङ ६ /७ त अर्ब पनि छैन । अहिले एकै दिनको ट्रेडिङ १५ देखि १६ अर्ब पुगि सक्यो । सबै बैंकले एकै चोटी बेच्न जाने पनि हैन नी हामीले यसले असर गर्दैन भन्दा पनि कतिपय मान्छेहरु आतिए ।
कतिपयले बजारको ट्रेन हेरे बजारको अवस्था यस्तो छ भनेर भन्छन । तर हामी भन्छाै फन्डामेन्टल एनलाइसिस( मौलिक विश्लेषण) नेपालको बजारमा बढी बलियो हुनु पर्छ । फन्डामेन्टल एनलाइसिस ( मौलिक विश्लेषण) अहिले काम गरेन भने केही समय पछि गर्छ । यसको विकल्प छैन । बजारमा लगानीकर्ताहरु आतिनु हुन्छ । अर्कोले कमाएकोमा पनि हुटहुटी छटपटी हुन्छ ।
केही समय अगाडीको कुरा गराै । विकास बैंक र फाइनान्सहरुको त कमाइ छैन । हाइड्रोमा बढ्यो भन्दै हाइड्रोमा लगानी गरे । लगानी गर्दा कस्तो सम्मको हाइड्रोमा गर्नु भयो भने । जसको नेटवर्थ पर सेयर एक सय भन्दा कम छ । जसको ५ बर्ष भित्र लगानीको ठेगान नै छैन । पाँच देखि छ बर्षमा पनि लाभांश दिन नसक्ने त्यस्ता कम्पनीको मुल्य २७ सय पुगि सक्यो । त्यस कारण राम्रा कम्पनीमा लगानी भएको लगानीकर्ता पनि त्यस्ता कम्पनीले कमाएको देखेर सबै सेयर बेचेर कम्जोर कम्पनीमा नै लगानी गर्न आइपुग्छ ।
किन कि उसले रातो र हरियो हेरेर लगानी गरि रहेको हुन्छ । त्यस्ता लगानीकर्ताहरुले हतारमा कम्पनी परिर्वतन गर्दा आफुले सस्तोमा बेचेको सेयर पनि महंगोमा किनिरहेका हुन्छन् । त्यसैले चाहे फन्डामेन्टल एनालाइसिस ( मौलिक विश्लेषण) होस वा टेक्निकल एनलाइसिस ( प्राविधिक विश्लेषण) हेरेर हामीले अगाडी बढ्याै भने मार्केटमा गुमाउने संभावना कम हुन्छ । लाभ पनि अलि बढि हुन्छ, अनि बजार पनि सक्षम हुन्छ ।
अहिले बजारको भोलुम बढी भएकोले कर्नरिङ हुन सक्दैन । कहि कतै हुन्छ भन्न चै सकिन्न । मुख्य कुरा भनेको लगानीकर्ता सचेत हुँनुपर्छ । बैंकमा फिक्स डिपोजिटमा पैसा राख्न आउदा यसले ८ प्रतिशत दिने अर्कोले ८‍‍.५ प्रतिशत दिएको छ भनेर बजार बुझेर दुइ लाख रुपैयाँ राख्न आउने , अनि दश लाख रुपैयाँ चै हल्लै हल्लाको भरमा लगानी गर्छ भने त्यो लगानीकर्ता लुटिन लायक छ । यसरी आउने कस-कसलाई बचाउन सकिन्छ ? त्यस कारण बजार कता गएको छ भन्ने कुराको फन्डामेन्टल एनालाइसिसलाई बढी ध्यान दिन जरुरी छ ।
पुँजीबजार सम्बन्धी we can ले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ज्ञावलीले राखेको धारणाको सम्पादित अंश
प्रकाशित : २२ जेष्ठ २०७८, शनिबार २१:०८
विकास हाइड्रोपावरले १४ करोड बराबरको आइपिओ निष्काशन गर्ने
नेप्से ४०.२६ अंकले घट्यो,५ अर्ब ३५ करोड ८० लाख बराबरको कारोबार